Haweenka Suudaan oo U Tashaday ‘Ragga Xaasaskooda khiyaana’ | Baligubadlemedia.com
Haweenka Suudaan oo U Tashaday ‘Ragga Xaasaskooda khiyaana’
“Waxay timahayga dhan iigaga xiireen sakiin waxayna iigu hanjabeen inay I kufsan doonaan xilli aan ku dhex jiray gaarigooda,” ayay tiri Jode Tariq.
“Waxay aniga iyo haweeney kaleba naga jareen timaha mar aan ku sugneyn meel aan la garaneyn oo dadka lagu xiro,” Afraa Turky ayaa sidaasi tir.
Sharcigu waa Qodobka 152 ee dembiyada wuxuuna ku saabsan yahay “ficillada aan habbooneyn” ee bulshada dhexdeeda
Waxaa ka mid ah xirashada “labis aan habbooneyn” amaba “amaba wax u dhimaya dareenka bulshada”
Haatan sawirro laga soo qaaday dibadbaxyada oo ay ka muuqdaan rag looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin waaxda NISS ayaa lagu wadaagay qolka, oo lagu magacaabo Minbar-Shat, taas oo micnaheedu yahay “Jaceyl Xad-dhaaf ah”.
Haddii qof uu garto amaba wax ku saabsan uu og yahay – waxay kuwa kale la wadaagaan xogtooda, mararka qaar xitaa magacyadooda, meelaha ay deggan yihiin iyo nambarradooda. Tani waxay horseedday in qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ay guryaha ku calaameeyaan qoraal ay ku sheegayaan inuu ku nool yahay qof ka tirsan NISS.
‘Ha i soo eegin’
Image caption Dibadbaxayaasha ka careysan qiimaha maciishadda ee sare u kacay ayaa doonaya inuu madaxweyne Bashir xilka ka dego
Mid ka mid ah ayaa tiri, “Madaxa ayaa ul la iiga garaacay sababtoo ah si kedis ah ayaan kor u eegay wuxuuna igu yiri, ‘Ma waxaad dooneysaa inaad sawirradeyda u dirto Minbar-Shat? Ha i soo eegin.'”
Image caption Dibadbaxayaal badan ayaa sidoo kale wajiga xirta si ay isaga difaacaan gaaska dadka ka ilmeysiiya
Image caption Madaxweyne Bashir, oo toddobaadkii hore u khudbeynayay dibadbaxayaasha, ayaa xukumayay Sudan ku dhowaad 30 sano
Ms Tariq iyo Ms Turky, oo ay labadoodaba bishii hore timaha ka jareen laamaha ammaanka, ayaa ku adkeysanaya inaysan joojin doonin dibadbaxyada ilaa uu madaxweyne Bashiir xilka ka dego